Miidiyaaleen dirqama ogummaasaanii dagachuu hin qaban
Miidiyaaleen guddina biyyaafi ijaarsa sirna diimookiraasii keessatti shoora olaanaa taphatu. Guddina biyyi tokko galmeessisaa jirtu hawaasa hunda walqixa hubachiisuun kaayyoo miidiyaa keessaa isa tokkodha. Miidiyaan biyyoota guddatan keessatti mootummaa 3fa jedhamee beekama. Miidiyaan sagalee ummata bal’aa ta’uun alatti riqicha mootummaafi ummata walqunnamsiisudha. Miidiyaan akkuma nagaa buusuu keessatti shoora qabu, balaa buusuufis humna guddaa qaba.
Tibbana naannawaa daangaa Oromiyaafi Sumaalee Itoophiyaatti walitti bu'iinsa daangaa naannolee lameen gidduutti uumameen walqabatee jeequmsa dhaabbilee barnoota olaanaa biyyattii keessatti uumame qixa sirriin gabaasuurratti miidiyaaleen hanqina guddaa uumaniiru. Haaluma walfakkaatuun walitti bu’iinsa aanaa Bunnoo Beddelleetti ummata Oromoofi Amaaraa gidduutti uumamee ture miidiyaaleen suuraafi viidiyoo dharaa agarsiisuun qooda jeequmsa qabanneessuu daran hammeessuuf yaalanis turaniiru. Torban darbe Abbaan Taayitaa Biroodkaastiingii Itoophiyaa haala tamsaasa oduu dhimma wayitaawaa biyyattii ilaalchisee qaama dhimmi ilaallatu waliin marii adeemsisuusaa ragaan Tajaajila Oduu Itoophiyaarra arganne ni ibsa.
Haaluma kanaan miidiyaaleen tokko tokko dhugaa qabatamaan lafa jiru caalaa oduu burjaajjessaa saboota, sablammoofi ummattoota biyyattii gidduutti shakkiifi jibba uumuu tamsaasaa turaniiru jedhu Daarekteerri Seeraafi Beeksisaa abbaa taayitichaa Obbo Gizawuu Tesfaayee. Kana malees, murtoowwan mootummaan nageenya biyyattii bakkatti deebisuuf dabarsaa ture tamsaasuarraas miidiyaaleen of qusachaa turanis akka jiran ibsameera. Bu’uuruma kanaan Dhaabbatni Raadiyoofi Teelevizhinii tokko tokko dhimma biyyaa moggaatti dhiibuun naannoo tokko qofarratti daangeffamaa turaniiru. Kanaafuu, jeequmsa ture daran finiinsuu keessatti gaheen miidiyaalee tokko tokko olaanaa waan ta’eef gochi akkasii biyya ummattoonni garaagaraa wal jaalalaan keessa jiraatan keessatti balaa guddaa ta’uun hubatamee of qusachuun gaariidha.
Miidiyaan biyyattii miidiyaa misoomawaa waan ta’eef raaree hiyyummaa keessaa ba’uuf misooma labsuufi ummata misoomaaf onnachiisuun dirqamasaati. Gama biraan ammoo odeeffannoo haqaafi loogiirraa bilisa ta’e gurra ummataan ga’uu qaba.Odeeffannoon haqaa jiraatus akkuma jiruun gabaasuu dura faayidaafi miidhaasaa madaaluun barbaachisaadha. Biyya ummattoonni adda addaa wal danda’uun tokkummaan keessa jiraatan kan akka Itoophiyaa keessatti tamsaasni odeeffannoo gulaala cimaa gaafata. Kana milkeessuufis miidiyaaleen giddu seentummaa qaamota biroo malee birmadummaan hojjechuu qabu.
Yeroo ammaa ummata biraas ilaalchi dogoggoraa mul’atu ni jira. Miidiyaan biyyattii keessa jiru miidiyaa ummataa ta’us ummatni sagaleesaa dagachuun odeeffannoo dharaa karaa miidiyaalee hawaasa tamsa’niirratti rarra’uutu mul'ata. Maddi ddeeffannoo karaa miidiyaa hawaasummaa qabatamaafi amanamaa waan hintaaneef dogoggoraaf saaxilamoodha. Haa ta’u malee, odeeffannoon miidiyaa ummataan darbu madda amanamaa kan qabuufi eenyuun akka barraa’eefi maaliif akka barraa’ee salphaatti hubachuun ni danda’ama.
Jeequmsa tibbana biyyattii keessatti mudatee tureen walqabatee badii lubbuufi mancaatiin qabeenya hedduu dhaqqabe garri caalu olola dharaa karaa miidiyaalee hawaasaa oofamaa turniin ta’uu yeroo adda addaatti ifa taasifameera. Kana jechuun miidiyaaleen ummataas miidhaa dhaqqabe keessaa qooda hin qaban jechuu miti.
Walumaagalatti, miidiyaaleen biyyattii nageenya biyyattii tumsuufi ijaarsa sirna diimokiraasii babal’isuu keessatti qixa barbaadameen shoorasaanii taphachuurratti hanqina waan qabaniif of sirreessuutu irraa eegama.
Torban kana/This_Week 12394
Guyyaa mara/All_Days 1821814